(ဥဩငှက် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
↑ Johnsgard, PA (1997). The avian brood parasites: deception at the nest. Oxford University Press, 259. ISBN 0195110420။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဥဩ&oldid=346169" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆၊ ၀၁:၁၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။